Phupatara resort, 2 igumbi lokulala Rayong
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMiwha
Ikhondom entsha yeenkwenkwezi ezi-5 ngaphakathi kweMarriott Rayong resort kunye ne-spa, indawo yokuphumla yolwandle ngokupheleleyo, indawo enkulu yokuqubha eThailand, le ndawo inamagumbi okulala ama-2, ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo, iibhedi kunye neetawuli zinikezelwe kunye ne-intanethi ekhawulezayo. Isanda kulungiswa ngo-Agasti ka-2018, yonke into ikwimeko egqibeleleyo yokurenta, kwaye ngoku iimfama zemoto kuzo zonke iifestile ezinolawulo olude.
Yintsha kwaye ingaphakathi kwihotele yeenkwenkwezi ezi-5 eyiMarriott Rayong resort kunye ne-spa.
Sinesitshixo sokutshixa idijithali kumnyango oyintloko, ngoko akuyomfuneko ukuba uphathe isitshixo, uya kuba unike ikhowudi, ibhokisi yokhuseleko kwigumbi. Unokusebenzisa izibonelelo zehotele yaseMarriott njengephuli kunye neeresityu.
Kukho 55 "ubukhulu beTV kunye nekhulu lemiboniso bhanyabhanya / iDVD ebandakanya iimuvi zabantwana.
Khangela ngaphakathi nangaphandle ixesha bhetyebhetye, ukhululekile ukuba uze naliphi na ixesha, njengoko sinoonogada iiyure ezingama-24.
Le flethi isandula ukulungiswa ngo-Agasti 2019, kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo kwilinen yokulala, iitawuli kunye nezinto zasekhitshini ezifana ne-toaster, i-micro wave, iipleyiti kunye neembiza, iiglasi kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko.
4.69 · Izimvo eziyi-39
Umbuki zindwendwe ngu- Miwha